Momba anay - Shijiazhuang Histe Electric Co., Ltd.
Talohan'ny taona 2008, ny vokatra lehibe anananay dia ny 110 kV sy ny volkano mitoka-monina ambany kokoa, miaraka amina famoahana an-jatony hetsy isan-taona, vita avy amin'ny silika vita amin'ny silika vita amin'ny afo avy any ivelany ary novolavolain'ireo manam-pahaizana manokana momba ny fingotra, mpahay simia ary manam-pahaizana manokana amin'ny grid mandritra ny fito taona fikarohana sy andrana. Ireo vokatra, izay namorona firaketana an-kavanana amin'ny ampihimamba. Rehefa avy nosedraina Wuhan High-Voltage Research Institute State Grid Corporation of China, National Center for Quality Supervision and Test of Insulator and Surge Arrester, amin'ny fenitra nasionaly GB11033, GB5598, JB5892-1991, JB / T8952-1999, ny vokatra dia noheverina ho mahafeno fepetra hanaraka fenitra nasionaly amin'ny lafiny rehetra.
Anisan'ireo mpiasa 256 rehetra, ny olona manana mari-pahaizana doctorat na bakalorea ho an'ny 7. “Mifikitra amin'ny fanavaozana ny orinasa; Mikaroha fandrosoana amin'ny teknolojia; Omeo ny vokatra avo lenta ”no hevitray mandritra ny fotoana rehetra.
Ny orinasanay dia teo amin'ny toerana voalohany foana tao an-trano niaraka tamin'ny finoany maoderina, nanamafy ny hery ara-teknika, nitondra ny fitantanana siantifika ary nanatanteraka ny fitakian'ny ISO9001:2000 fenitra, mari-pahaizana feno kalitao sy mari-pahaizana feno, teknika fanandramana avo lenta ary serivisy apetraka aorian'ny fanompoana.
Manantena ny fiaraha-miasa aminao ato ho ato.
Nahita ny fitomboantsika
Nandritra ny 10 taona, ny orinasanay ho an'ny fananganana jiro herinaratra nasionaly ary manome retrofit dia manome fantsom-pifandraisana an-tapitrisany sy vokatra tambajotra mpanohana hafa. taorian'ny 1998 ny fikarohana sy ny fampandrosoana 500kV an'ny orinasa ary ny insatera mitambatra ambany, 35kV ary ny fidirana amin'ny zinc oxide arrester fanampiny, ny fantsom-panafody, ny fuse dropout, ny fantsom-bisy fitifirana herinaratra, ny booster, ny fantsom-bolan'ny herinaratra (boaty) sns. Izy io dia nahatsapa ireo vokatra elektrika manomboka amin'ny tsindry ambany ka hatramin'ny tosika avo ary ny fiovan'ny tsindry ultrahigh. ; miainga amin'ny maha-mpitovo ka hatrany amin'ny fanamorana, Maneho ny fijerin'ny orinasa ny ho avy, mba hahafahana mamorona andiana mpisera serivisy feno eritreritra. Ary nanao fandraisana anjara lehibe ho an'ny herinaratra, lalamby, solika, toeram-pitrandrahana arintany ary rafitra fiarovana ny herinaratra ho an'ny orinasa lehibe.
Ny katalaogin'ny vokatra: 220kV sy ny voltage ambany Zinc oxide arrester arrester, switch mitoka-monina, fuse dropout, fantsom-pisotroana bus-bar, fantsom-booster, fantsom-bolan'ny valizy (boaty), fantsom-bozaka, 110kV ary prefabrication voltage ambany, feno mangatsiaka tanteraka na kojakoja fantsom-pifandraisana mihena hafanana, 500kV ary insulator fitambaran-tariby ambany sns isan-karazany ny vokatra elektrika.
Nandritra ny vao tsy ela izay dia nanao ihany koa ireo kojakojam-tariby kely (seta 100, 15 andro ny fotoana fandefasana), insulator (630 ampaham-potoana, fotoana fandefasana mandritra ny 15 andro), fanokanan-toerana (vondrona 300, fotoana fandefasana mandritra ny 45 andro) asa, fahafahan'ny famokarana ny mari-pahaizana mahavoky dia 40%, ny fahaizana manao an'ity bid ity ny famokarana.